नारी होइन लोकतन्त्र नांगियो
कुनै बेला वामदेव गौतम गृहमन्त्री थिए, उनले अव रेडलाइट एरिया तोक्न र यौन बजारको लाइसेन्स दिने बेला भयो भन्दा विवादमा परे । अर्की डीआइजी पार्वती गुरुङले पनि कानुनले बर्जित गरेको यौनपेशा धेरै बढीसक्यो, अव कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्छ, रोक्न सकिन्न भनिन् । उनी आइजीपी बन्ने लाइनमा थिइन्, त्यति नै बेला खिलराज रेग्मीको सरकार बन्यो र सिनियर उनलाई अवकाश दिएर, जुनियर अर्याललाई आइजीपी बनाइयो । जेहोस्, यौनबजार देशमा खरबारी हल्किएजसरी हलक्कै बढेको छ भने पहिले पहिले बम्बैका कोठीमा बेचिने युवतीहरु यतिबेला विश्वव्यापी रुपमा यौन बेचिरहेका छन् । नेपालको यौनबजार विश्वव्यापी भइसकेको छ । चाहे त्यो खुशीले होस्, बेचिएर होस्, बैदेशिक रोजगारीको आवरणमा होस् । यथार्थ यही हो कि नेपाली युवती बैध अवैध मार्गबाट विदेशी यौन बजारसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।
कडा कानुन छ, मानव बेचबिखनको । कानुनले कारवाही गर्न सकेन, मानव बेचबिखनको काम झन झन बढेर गएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटान्सको अर्थतन्त्र हो । यो रेमिटान्समा महिलाको यौन बेचेको करको पनि योगदान छ । थाइलेण्डको ६० प्रतिशत राजस्व सेक्सबजारबाट आम्दानी हुन्छ । नेपालको हरिया बन नेपालको धन भनिन्थ्यो, सकियो । पर्यटन र पानी भनिन्थ्यो, सुरक्षाका कारण दुबै नारामा सिमित छ । अव संघीयताले विकास हुन्छ भन्दैछन्, संघीयताका नाममा १४ सयभन्दा बढी सांसद र तिनका आसेपासे पाल्दैमा बजेट स्वाहा भएपछि के को विकास हुन्छ ? रोजगारी छैन, आधुनिकताले गाँजेका र जहानबच्चा परिवार पाल्ने र सुख खोज्ने सपना पालेका युवायुवती दिनहुँ हजारों बाहिरिने क्रम जारी छ । बैध मार्गबाट नसके अवैध मार्गबाट विदेशीनेको संख्या कहालीलाग्दो छ ।
भनिन्छ, यतिबेला ६० लाख युवा रोजगारी खोज्दै विदेश गएका छन् । यसमा २२ लाख महिला कुनै न कुनै रुपमा विदेशीएका छन् । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत महिला यौन बेचिरहेका छन् । जवानी बेच्ने रोजगारी गरिरहेका छन् ।
यौन र पानी उस्तै हो । ओरालोमा बग्छ । जवानी सधैं रहन्न, ढल्कन्छ । जवानी ढल्केपछि मानसिक तनावमा पर्छन् । यो समस्या नेपाली युवतीहरुमा पनि देखिन थालेका छन् । कतिपय महिला पागल भएर, कतिले अर्काको बच्चा च्यापेर फर्कदैछन् भने कतिपय उतै मर्ने, जेल पर्ने र समस्या भोगिरहेका पनि छन् ।
हेर्ने कसले सरकार रेमिटान्समात्र हेर्छ, नागरिकको बेहाल हेर्दैन ।
राजधानीमा २० लाख महिला यौन बेचिरहेका छन् । देशभरि यौन बजार फस्टाएको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरुको रिपोर्ट हेरौं, अवैध अवैध रुपमा दिनहुँ मेरी स्टोप्सहरुमा गर्भपतन भइरहेका छन् । गर्भपतनको रेकर्डले समाजमा विकृति र बिसंगति डरलाग्दोसँग बढेको देखिन्छ ।
थाइलेण्डमा ६० लाख, डोमेनिकन गणतन्त्रमा ६० हजार, कम्बोडियामा ५० हजार यौनकर्मी यौन बेचिरहेका छन् । नेपालमा देहव्यापार बन्देज छ, तर बन्देजको साइनबोर्डभित्र देहव्यापार खुल्ला छ । यो कुरा खुलासत्य बनिसकेको छ ।
२ महिनाअघि केन्याबाट ९ जना नेपाली युवतीहरुको उद्धार भयो । यो उद्धारमा भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलेसमेत सघाइन् । तिनीहरु जबरजस्तीमा परेर यौन बेचिरहेका थिए । नेपाली युवतीहरुको देहव्यापारको अत्यधिक माँग अफ्रिकन देशहरुमा हुनथालेको छ । केन्या, ब्राजिल, तान्जानिया, कंगो, युगाण्डासम्म नेपाली महिलाहरु पुर्‍याइएका छन् र देहव्यापारमा लगाइएका छन् ।
यतिमात्र होइन, नेपाली युवतीको छाला राम्रो हुने भएकाले छाला काढ्न र आफ्ना काला अनुहारमा टाँस्नसमेत नेपाली युवतीहरुको तस्करी भइरहेको छ । नेपाल सरकार यो सब टुलुटुलु हेरिरहेको छ । नेपाली युवतीको सेक्स बजार विश्वभरि बिस्तार भइरहेको छ । रेमिटान्स हेर्ने, रोजगारी दिन नसक्ने सरकार यता हेर्दैन । जिम्मेवारी वोध गर्दैन । गैरजिम्मेवारी बढेपछि नारी नांगिए कि गणतन्त्र ? कसलाई चिन्ता ?